ट्यूटोरियलहरू - स्मार्टमे
डोम » ट्यूटोरियल
जब तपाईं नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुहुन्छ र तपाईंसँग अनुभवको कमी छ, प्राविधिक सल्लाह प्रयोग गर्नुहोस्। हामी बुद्धिमान घर व्यवस्थापन प्रणाली को अपरेशन वर्णन र कुन उपकरण छनौट गर्न सल्लाह। हाम्रो चरण-देखि-चरण गाईडहरूले टेक्नोलोजीको जटिलताहरूको वर्णन गर्दछ ताकि तपाईंसँग भरपर्दो ज्ञान छ।
Xiaomi / Aqara उपकरणहरू कसरी गेटवेसँग पेयर गर्ने - यद्यपि तिनीहरू अनुप्रयोगमा छैनन्!
तपाईंले सेन्सर किन्नुभयो तर यो अनुप्रयोगमा छैन र तपाईंलाई लाग्छ यो पैसाले नालीमा फाल्यो? चिन्ता नगर! यसले पनी परिवर्तन गर्न सक्छ कि हाम्रो मार्गनिर्देशनलाई धन्यबाद तपाईले जे भए पनि यो थप्नुहुनेछ!